अक्सिजनको अभावले सिकिस्त बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न समस्या - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ अक्सिजनको अभावले सिकिस्त बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न समस्या
अक्सिजनको अभावले सिकिस्त बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न समस्या
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७८ वैशाख ३१ गते, १०:२५ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज–अक्सिजनको अभाव बढ्दै गएपछि नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामीलाई अक्सिजन पु¥याउन र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अक्सिजनको अभावका कारण सिकिस्त बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अस्पतालका आइसियु वार्डका प्रमुख डा. पारस पाण्डेले बताए ।
भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीलाई २४ घन्टामा करिब १० सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ ।
भेरी अस्पतालको अक्सिजन पाइपलाइनको क्षमता ७० देखि सय जना बिरामीलाई अक्सिजन दिन पुग्नेछ । तर, भेरीमा अहिले अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामी मात्रै २ सय भन्दा बढी भर्ना छन् ।
भेरी अस्पतालको आफ्नो ग्यास प्लान्ट छैन । उद्योगबाट सिलिन्डरमा भरेर आएको अक्सिजन ग्यासबाटै बिरामीहरुलाई आवश्यकताअनुसार अक्सिजन ग्यास दिने गरेको छ ।
अस्पतालले कोरोना वार्डका लागि अक्सिजन सप्लाई गर्न १८ वटा सिलिन्डरको मेनीफोल्ड बनाइएको छ । बिरामीको चाप बढेसँगै प्रत्येक ५ देखि ७ मिनेटमा एउटा सिलिन्डर खपत हुन्छ । खाली भएको सिलिन्डरलाई निकालेर तुरुन्तै नया सिलिन्डर लगाउनु पर्छ । खाली सिलिन्डर निकालेर भरी सिलिन्डर लगाउन ढिलाइ हुना साथ अक्सिजन पाइप लाइनको प्रेसर कम हुने अस्पतालको अक्सिजन युनिटका प्राविधिक फिदा हुसेनले बताए ।
पछिल्ला दिनहरुमा नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा मात्रै दैनिक ४ सय देखि ४ सय ५० सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास खपत भइरहेको छ । अक्सिजन ग्यासको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । उद्योगबाट ग्यास आउन ढिलाई हुदा साथ अस्पतालका प्राविधिक र चिकित्सकहरुलाई कति बेला अक्सिजन ग्यास सकिने हो भन्ने चिन्ता हुन्छ ।
हावाहुरीका कारण अक्सिजन उद्योगमा विद्युत अवरुद्ध भएर अक्सिजन उत्पादन रोकिदा हिजो मात्रै अस्पतालको अक्सिजन सप्लाईको चेन २ पटक ब्रेक हुने गरेको अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले बताए ।
नेपालगन्जमा दुई वटा मात्रै अक्सिजन उद्योगहरु छन् । २४ घन्टा विद्युत लाइन भयो भने ती उद्योगहरुले दैनिक ११ सय सिलिन्डरसम्म ग्यास उत्पादन गर्न सक्छन् ।
नेपालगन्जकै अक्सिजन उद्योगबाट बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतदेखि धनगढीसम्म अक्सिजन सप्लाई हुँदै आएको छ । अस्पतालहरुबाट दैनिक २२ सय ५० सिलिन्डरको माग भएपनि उत्पादन भने करिब ११ सय सिलिन्डर मात्रै भएका कारण अक्सिजनको माग धान्ने नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अक्सिजन व्यवसायी राजीव तरङगाले बताए ।